Madaxweynaha: “Socdaalkeyga Dhuusamareeb waxaan ku soo arkey shacab diyaar u ah inay heshiiyaan, maamulna dhistaan’’ – Radio Muqdisho
Madaxweynaha: “Socdaalkeyga Dhuusamareeb waxaan ku soo arkey shacab diyaar u ah inay heshiiyaan, maamulna dhistaan’’
Muqdisho, Arbaco 11 February: Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dadaalka dib-u-heshiisiinta ee shacabka gobollada dhexe iyo in degaannadaasi dhowaan laga dhiso maamul loo dhan yahay.
Madaxweynaha oo ka hadlayey munaasabad casho sharaf ah oo uu Raiisul Wasaare Cumar Cabdirashiid magaalada Muqdisho ugu sameeyay xubnaha baarlamanka ayaa sheegay inuu indhahiisa ku soo arkey sida shacabka, siyaasiyiinta iyo qeybaha kale ee bulshada ay uga go’an tahay inay is cafiyaan, mustaqbal wanaagsanna u horseedaan degaannada gobollada dhexe.
“Biseyl ayaan ku soo arkey Dhuusamareeb iyo dad diyaar u ah inay ka gudbaan wixii la soo marey. Waxaan isku soo afgaraney in shirarka dib-u-heshiisiinta ay halkooda ka sii socdaan ilaa dhammaadka bishan, marka la gaaro bisha Maarso-na la gudagalo barnaamijka maamul loogu sameynayo gobolladaasi,’’ ayuu yiri Madaxweyne Xasan.
Madaxweynaha ayaa sheegay in Dowladda Federaalka ay si buuxda uga shaqeyneyso, isla markaaana dhiirigelineyso fududeynta dhismaha maamul goboleedyada.
“Gobollada dhexe ee Soomaaliya muhimad gaar ah ayay u leeyihiin nabadeynta Soomaaliya iyo dhismaha mustaqbal wanaagsan oo shacabkeenna ay ku faanaan. Waa muhiim midnimada dadka deegaanka, dowladda dhexe waxay si gaar ah xil isaga saareysaa sidii loo gaari lahaa, maamul iyo kala dambeyn, nidaamkaas oo ah kan keliya ee horumar lagu gaari karo”.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bulshada gobollada dhexe ugu baaqay in ay midoobaan oo ay shirarkan ay ka soo saaraan tallooyin ku dhisan deganaansho iyo wadajirka shacabka wada dega.
Dhanka kale Madaxweynaha waxaa intii uu joogay Dhuusamareeb uu tababar ugu soo xirey ciidammo ka tirsan Taliska Nabadsugidda.
Xalinta colaadda Beladweyne oo meel wanaagsan mareyso